फेसबुकको डरलाग्दो जासूसी : प्रयोगकर्ताको सबै गतिविधि निगरानीमा (प्रतिवेदनसहित)
२५४ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताको हरेक जानकारी गोप्य ढंगले संकलन गरेर जासूसी गरेको उल्लेख
फोटो : सन्चारर्की ग्राफिक्स/गेट्टी इमेज
काठमाडौं, ३० जेठ । गत अप्रिलमा फेसबुकबाट प्रयोगकर्ताको जानकारी चोरिएको ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्ड’पछि संस्थापक मार्क जुगरबर्गले अमेरिकी कंग्रेसको आदेशनुसार २५४ पृष्ठको स्पष्टिकरण प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
अमेरिकी कंग्रेसमा गत शुक्रबार बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन डेलिमेल अनलाइनले मंगलबार (हिजो) सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताको के–के जानकारी संकलन गर्छ भनेर १८ ओटा विधिसमेत खुलाइएको छ ।
डेलिमेल अनलाइनका अनुसार ४५४ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताको हरेक जानकारी गोप्य ढंगले संकलन गरेर जासूसी गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा फेसबुक प्रयोगकर्ताले चलाएको मोबाइल, ट्याबलेट, कम्प्यूटर तथा अन्य डिभाइसको सम्पूर्ण जानकारीसहित माउसको गतिविधिसमेत निगरानी हुने गरेको उल्लेख छ ।
त्यतिमात्रै होइन, फेसबुक लग इन भएको डिभाइसमा ब्याटरीको लेभल कति छ ? मेमोरी क्षमता कति छ, कति बाँकी छ ? नजिकै अरु क–कसले फेसबुक चलाइरहेका छन् उनीहरुको नम्बर कति हो ? आदीसमेत फेसबुकले निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको अनलाइन र अफलाइन गतिविधिहरु समेत फेसबुकको मुख्य कार्यालयमा सुरक्षित भएर बस्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती निगरानीमार्फत फेसबुकले प्रयोगकर्ताको मोबाइल, ट्याबलेट तथा अन्य डिभाइसमा भएका फोटो, भिडियोलगायत अन्य फाइलहरु सजिलै हेर्न सक्छन् ।
तर, कतिपय अन्य निगरानीहरु भने प्रयोगकर्ता मिलाएको शेटिङमा भरपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेका अमेरिकी कंग्रेसका कानुन निर्माणकर्ताहरुले मार्क जुकरबर्गले आफ्ना फेसबुक प्रयोगकर्तामाथि जाशुसी गरेर उनीहरुको सार्वजनिक जीवनमा भ्वाङ पार्ने काम गरेको प्रमाण क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्डबाट छलङ्ग भएको बताएका छन् । उनीहरुले प्रतिवेदन अध्ययनपछि भनेका छन्, ‘फेसबुकका मालिक जुकरबर्ग अझै कतिपय गम्भिर प्रश्नको उत्तर दिन असर्मथ भएका छन् ।
नयाँ प्रतिवेदनले प्रयोगकर्ताको जानकारीको गलत प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएपनि विश्वस्त हुन नसकिने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
जुकरबर्गले पेश गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको फेसबुक प्रयोगकर्ताको १८ विधिगत जानकारीभित्र कुन–कुन जानकारी संकलन गर्छ त ?
१) डिभाइसको जानकारी– फेसबुक लगइन भएको फोन, ट्याबलेट, स्मार्ट टीभि, कम्प्यूटर वा अन्य कुनैपनि डिभाइसको सम्पूर्ण जानकारीहरु जस्तै नाम, ब्राण्ड र लोकेशन ।
२) माउसको चाल– फेसबुक लगइन भएको डिभाइसमा जोडिएको माउसको गतिविधि
३) फेसबुकसँग जोडिएको एप्स्बारे जानकारी– फेसबुक लगइन भएकोे अन्य एप्स्बारेसम्पूर्ण जानकारी र मोबाइलमा भएको अन्य फाइलमाथि नियन्त्रण
४) अप्रेशन सिस्टमबारे जानकारी– फेसबुक प्रयोगकर्ताले फेसबुकसँगै कुन–कुन इन्टरनेट साइट खोलिरहेको छ भन्ने जानकारी ।
५) इन्टरनेट, मोबाइल र ब्लुटुथको सिग्नलबारे जानकारी– इन्टरनेट, मोबाइल र ब्लुटुथको सिग्नल र ती सिग्नल कहाँबाट आइरहेका छन् । मोबाइल टावर कति दुरीमा छ कुन ठेगानामा टावर छ । नजिकैको वाइफाइ सिग्नल, एक्सेस् पाइन्ट, सिग्नलको क्वालिटिसहित ब्लुटुथ सिग्नलबारे जानकारी राख्दछ ।
६) नेटवर्कमा आवद्ध सन्जालबारे जानकारी– एकजना फेसबुक प्रयोगकर्ताले चलाएको डिभाइससँग जोडिएको वाइफाई र त्यस वाइफाईसँग जोडिएको अन्य मोबाइल तथा कम्प्यूटरबारे जानकारी राख्दछ ।
७) ब्याटरी लेभल –फेसबुक लगइन भएको डिभाइसको ब्याटरी लेभल कति छ भन्ने जानकारी राख्दछ ।
८) मेमोरी क्षमता– फेसबुक लगइन भएको डिभाइसको मेमोरी कति छ ? भन्ने जानकारी राख्दछ ।
९) पल्गिन्सबारे जानकारी– फेसबुक लगइन भएको डिभाइसमा कुन–कुन सफ्टवेयर पल्गिन्स इन्स्टल भएको छ भन्ने जानकारी राख्दछ ।
१०) इन्टरनेट स्पिड – फेसबुक लगइन भएको डिभाइसमा नेटवर्क कनेक्सन्स्को स्पिड कति छ भनने जानकारी राख्दछ ।
११) अनय एप्स्बारे जानकारी –फेसबुक लगइन भएको डिभाइसमा अन्य कुन–कुन एप्स डाउनलोड चलेको छ,कतिबेर चलाएको छ र कुन–कुन डिलिट भए भन्ने जानकारी राख्दछ ।
१२) कन्ट्याक्ट लिस्ट–फेसबुक लगइन भएको डिभाइस (मोबाइल)को कन्ट्याक्ट लिस्टमा क–कसको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना छ भन्ने जानकारी राख्दछ ।
१३) क्यामरामा पहुँच– फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा कुन–कुन विशेषता भएको क्यामरा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी राख्दछ ।
१४) ग्यालरीसम्म पहुँच –फेसबुक लगइन भएको मोबाइलका कुन मिति र समयमा फोटो खिचिएको थियो भन्ने फाइल्सको मेटाडाटाबारे जानकारी राख्दछ ।
१५) जिपिएस लोकेशनबारे जानकारी– रियल टाइममा क्यामरासम्म पहुँच तथा जिपिएस लोकेशन मोबाइल फोनको शेटिङमार्फत जानकारी राख्दछ ।
१६) अनलाइन तथा अफलाइन गतिविधिबारे जानकारी – फेसबुक लगइन नभएको समय वा डाटा अफ भएको समयमा कुन–कुन एप्स तथा गेम चलाइयो अनलाइन तेस्रो पार्टीबाट प्राप्त डाटामार्फत अनलाइन तथा अफलाइन गतिविधिबारे जानकारी
१७) मोबाइल तथा कम्प्यूटरको चलाइने गेम तथा फेसबुक एकाउण्ट जोडिएको अन्य एप्समार्फत डिभाइसको सम्पूर्ण जानकारी ।
१८) कोहि कसैले अन्य फेसबुक प्रयोगकर्ताको फोटो तथा स्टाटस कमेन्ट्स, लाइक तथा शेयर गरे उनीहरुको परिचय, फोन ठेगानालगायत जानकारी ।
कंग्रेससामु पेश गरिएको प्रतिवेदन हेर्नुस् (भाग १)
प्रतिवेदन हेर्नुस् (भाग २)